FIRAISAN-KINA HO FANAVOTANA AN’I MADAGASIKARA: “Ny vahoaka no tompon’ny fahefana”.
Lynda ANDRIATSITONTA 0 Commentaire mai 9, 2017
Nitombo indray ny vovonana hiady ho amin’ny fanavotana ny firenena Malagasy. Hery velona mihoatra ny 50 isa nanambatra ny heriny ho fikambanana iray mitondra ny anarana hoe: Firaisan-kina ho Fanavotana an’i Madagasikara. Ambetin- tenin’ny fikambanana ny fanarenana ifotony ny firenena satria mahatsapa izy reo fa efa mihoa-pampana ny fahantran’ny vahoaka noho ny ataon’ny fitondram-panjakana. “Ny fampivondronana ny hery no fanefitra ho enti-miady hanarenana an’i Madagasikara”, hoy Odon, Filohan’ny antoko politika Aroriaka.
Zary lasa ny vahoaka ny mizaka ny tsy eran’ny ainy raha tokony higoaka ny tombontsoan’ny harem-pirenena. Ireo olom-bitsy no faly sy mitsetsitra izany. Ny fitrandrahan’ireo vahiny ny harem-pirenena izay tsy mitondra fampandrosoana ho an’ny besinimaro akory no tena idiavian’ity fikambanana ity.
Ho an’ny fikambanana , ny vahoaka no tompony fahefana ka izany no hivondronan’izy ireo mba hanentana ny vahoaka fa manana fahefana amin’ny harena voajanahary misy ao aminy izy. Mpanamora ny fitrandrahana azy hivadika fitaovana hampandrosoana ny firenena fotsiny ny fitondrana, izay ny vahoaka ihany no nifidy azy.
‹ PMU BET: Ouvert à tous les amateurs de courses de chevaux partout à Antananarivo.	› KOPERATIVA MADA OMBY: Hiato ny famatsiana omby eto Antananarivo.